Silsilad silig mesh mashiinka, digaagga baqashada mashiinka laba geesoodka ah, silsilad isku xidha xayndaabka mashiinka - Youte Makiinado
Dingzhou Youte Mashiinka Warshadaha Co., Ltd. waxaa laga diiwaan galiyay sanadkii 2017 waxayna ku taalaa Magaalada Dingzhou ee Gobolka Hebei ee dalka Shiinaha, waxayna ku fadhidaa dhul dhan 10,000 oo mitir murabac ah. Waxaan nahay soo saare xirfadle ah mashiinada mesh mesh. Laga soo bilaabo 2008, waxaan u dhoofinay 40 dal iyo goballo adduunka ah, oo ay ka mid yihiin Malaysia, Thailand, Vietnam, Spain, South Africa, North Africa, Iran, India, Morocco, Argentina, iwm.
22 sano oo khibrad ah
Loo dhoofiyey 40 wadan
Oo daboolaya aag 10,000 ㎡
Magaca Faahfaahinta Mashiinka Duufaanta Yar: Fiilo Xidhan oo xidhxidhan Isticmaal: loo isticmaalo xarigga siligga dhismaha, xirashada beerta, dhererka, dhexroor duubista, baakadaha ayaa lagu soo saari karaa iyadoo loo eegayo shuruudaha macaamiisha, ku habboon, dhakhso leh oo qurux badan. Fiilo yar yar oo la duubay waxay u qaybsan tahay silig gaagaaban oo yar-yar oo la duubay, PVC silig yar oo la duubay, silig yar oo dabacsan oo annealed ah, silig yar oo bir ah oo aan daxalaneyn, silig yar oo duuban oo naxaas ah, silig naxaas ah oo silig yar la duubay.
Sharaxaadda Mashiinka Net Net Qalabka ah shabaqa beerta: siligga PVC, siligga caagga ah ee dahaarka leh, wuxuu leeyahay astaamaha u adkaysiga daxalka, muuqaalka quruxda badan, iyo ilaalinta wax ku oolka ah Badeecaddu waxay isticmaashaa alaabta ceeriin oo tayo sare leh, waxayna soo martay daaweyn gaar ah oo dusha sare ah, taas oo ah mid aad u badan adkaysi u daxalka. Shayga la dhammeeyay wuxuu ku raaxeeyaa hubinta tayada toban sano ah. Si fudud loo rakibo: Looma baahna qalab gaar ah oo loogu talagalay rakibidda alaabada, iyo nooca riixa ...
silig laba geesood mesh ma ...
Automatic wixagonal wi ...
Mashiinka netka qafis ee Gabion Mesh Stone waxaa sidoo kale loo yaqaan mashiinka weyn ee hexagon weyn. Mashiinka mesh gabion-ka wuxuu leeyahay qaab-dhismeed jiif ah waxaana loo isticmaalaa in lagu soo saaro meshes waaweyn oo laba geesleyaal ah oo leh ballacyo kala duwan oo mesh ah iyo cabbirro kala duwan oo mesh ah. Qalabka ceyriinka ah wuxuu noqon karaa silig bir ah ama silig bir ah polyvinyl chloride, siligga birta GALFAN iyo wixii la mid ah. Mashiinka mesh gabion wuxuu bixin karaa alaabooyinka mesh gabion ee mashaariicda dhismaha kala duwan. Wax soo saarka Gabion badanaa waxaa loo isticmaalaa in lagu ilaaliyo laguna taageero wadooyinka, r ...